Ọnụnọ nke nsụhọ na echiche ịdị adị - AFRIKHEPRI
Kedu nri taa maka ezi ahụ ike?
Fraịde, Julaị 10, 2020
Ka anyi leba anya na ndi mmadu ...
Anyị na-echegbubiga onwe anyị ókè ma na-echegbu onwe anyị ka anyị ghara ịdaba ọkụ. Anyị na-eje ije dị ka ndị na-emepụta ihe omume, na-eme ka ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị dị ka ihe atụ: automatisms, phrases, preferences, conventions bụ akụkụ dị mkpa nke oge anyị.
Ka anyi leba anya n'ile anya nke ndi mmadu ...
Anyị bụ ndị na-eduhie okwu ụgha, anyị na-ekwupụta okwu ịkpọasị ọjọọ nke na-ezochi ọnụ ọchị. Anyị na ịnụ ọkụ n'obi na obiọma bụ ntụ nke a na-atụba n'anya ndị nwere ike ịkọwa n'ihi na obi jupụtara na ekworo, ihu abụọ na ịkpọasị.
Ka anyị leba anya n'ụdị anamorphic adị…
Ndụ bụ ụbọchị ụra ebe a na-eduhie anyị. Echiche ndị a na-eduhie anyị ruo ụbọchị nke ìhè nke eziokwu kpughere, anyị ga-enwe ọganihu ịnakwere ihe kachasị mkpa.
Ihe niile gbanwere ma ọ bụ tinye aka. Ihe niile gbanwere ma ọ bụ mgbanwe. Ihe ọ bụla na-emenye ụjọ na-enwe oge nke oge.
Dị ka ọdachi dị ka oké mmiri ozuzo, dị ka ọdachi dị ka mbufịt dị ka mbibi dịka ala ọma jijiji, oge na-eme ka ihe dị iche iche na-aga, na-agbapụta ihu ma na-eme agadi, na-enwe mmetụta na ihe ọhụụ na ihe. Ngbaghara na nkwụsị, ọgba aghara na ịhazi, agha na udo, ije na inertia.
Ndụ bụ a perennial circadian usoro ebe ihe contingency fluctuates sandstone imponderables. Ọ na-eburu ya ihere nke impermanence. A ndụ ebe anyị nwere ike nụrụ ụtọ na nectar ephemeral obi ụtọ ma nke anyị ga-na-alụ ọgụ ọ bụla ụbọchị nke ikpeazụ guzoro megide a juru ebe niile aghara na ike agwụ mgbe anyị na-trépasserons anyị ozu ahụ, anya anyị mkpụrụ obi-nnunu na-ebili n'ime ether n'ofè spatio-temporal ubi makụọ mgbe ebighị ebi. Uche anyị ga-enwetaghachi ahụ noumenon.
Maka mmiri mmiri dị n'oké osimiri,
Maka ọka ájá na nnukwu ọzara
Maka osisi dị n'oké ọhịa,
Oge adịghịzi adị, nhụjuanya enwekwaghị ihe ọ bụla.
Imeri Grail Dị Nsọ
Lelee n'okpuruala (2016)